Aluminium Profile yeKuvaka
Aluminium Profile yeIndasitiri
Aluminium Profile yeWindow System uye Curtain Wall
Sliding uye Casement Yakasanganiswa Window
Mbudzi 24 ndiyo yekupedzisira China muna Mbudzi. Pakanga pasina zuva rekutenda. Zvakasarudzwa nenyika pakuda. Yakanga isati yasvika muna 1863, mushure mekusununguka, apo mutungamiri Lincoln akazivisa Thanksgiving izororo renyika. China yekupedzisira munaNovember iZuva reKutenda. ...
2021, Iwe unofanirwa kunzwisisa zvakare aluminium alloy !!!
Nekuwedzera kwekugadzirwa kwemotokari uye kutengesa, kushandiswa kwesimba uye kusvibiswa kwemhepo kunogadzirwa panguva yekugadzira uye kushandiswa kwemotokari kuri kuwedzera. Panguva imwe cheteyo, kushatiswa kwemhoteredzo kuri kuwedzerawo kukurumbira. Naizvozvo, kuitira kusimudzira ...
Aluminium mbiri inoshandiswa muindasitiri yekushongedza
Mazuva ano nzanga iri munguva yepamusoro-soro, hupenyu hwedu hunofanira kunge huri kugadzirwa kwe-high-tech shanduko chero nguva. sarudza kuti sei uchisarudza aluminium zvinhu pane st ...
The Resources of the Aluminium Vanhu vazhinji vanowanzofunga kuti iron ndiyo simbi yakawanda kwazvo pasi pano.Kutaura zvazviri, aruminiyamu ndiyo simbi yakawanda kwazvo pasi pano, ichiteverwa nesimbi.Aluminium inoita 7,45% yehuremu hwose. .
na admin pa 21-09-17
Munyika dzakasiyana-siyana munyika dzose munyika ine pachayo National Day, National Day kupemberera nzira, nokuti musiyano wetsika uye tsika, uye siyana somewhat.The National Day izororo renyika imwe neimwe inokosha, asi nyika dzakasiyana-siyana 'National Day zita zvakasiyana....
Mutambo unofadza weMid-Autumn, mutambo wechitatu uye wekupedzisira wevapenyu, waipembererwa pazuva regumi neshanu remwedzi wechisere, kutenderedza nguva yematsutso equinox. Vazhinji vaingoridaidza se "Gumi neshanu reMwedzi wechisere". Mukarenda yekuMadokero, zuva re...
Australia inoita mutongo wekupedzisira unopesana nekurasira paMalasia akakwenenzverwa aluminium profiles
Musi waChikumi 2, 2021, Komisheni yeAnti-Dumping yeAustralia yakapa Chiziviso Nha. )...
Ongorora kuvakwazve kweAfghanistan kubva pamaonero ehupfumi hwekuvaka uye simbisa zvakanakira aluminium muindasitiri nekuvaka.
Nhasi, tiri kukurukura maonero ehupfumi hwekuvaka hwekuvakwazve kweramangwana rezvirongwa zvakasiyana muAfghanistan, uye totaura nezve zvakanakira aruminiyamu mumaindasitiri uye kuvaka.
Ngano yeChinese Valentine's Day - Qixi Mutambo
Qixi Mutambo, unobva kuChina, ndiwo mutambo wekutanga werudo munyika. Pakati petsika dzakawanda dzechivanhu dzeQixi Mutambo, dzimwe zvishoma nezvishoma dzinopera, asi chikamu chikuru chayo chakaenderera mberi nevanhu. Mune dzimwe nyika dzeAsia dzakapesvedzerwa netsika dzeChinese, dzakadai seJapan, Korean Penin...
Fujian FOEN Boka: Kugadzira zvigadzirwa zvine mukurumbira zvemhando muindasitiri yealuminium nemoyo
na admin pa 21-07-29
Fujian FOEN Aluminium Co., Ltd. yakavambwa muna 1997 iine capital capital yakanyoreswa 500 miriyoni yuan uye inofukidza nzvimbo inosvika mazana matanhatu maeka. Ndiyo yakakura kwazvo aluminium alloy kuvaka uye maindasitiri profiles ekugadzira base muFujian Province. Iyo kambani inoshanda muR&D, prod ...
Ndeapi maitiro epamusoro ekurapa ealuminium alloy?
Pakati pezana ramakore rechi 19 France, tekinoroji yekunyungudutsa aruminiyamu yaive kumashure zvekuti machinda nevashumiri vaigona chete kushandisa sirivha yekucheka pamabiko. Napoleon II chete ndiye akashandisa mbiya dzealuminium.Nekushandisa kwe electrolytic aluminum tekinoroji, aruminiyamu yakawanda uye yakawanda muhupenyu hweveruzhinji;Neiyo develo...
WBMS: Kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi 2021, musika wepasi rose wealuminium wakapfupika ne588 zviuru zvematani.
Mharidzo yemashoko yakabudiswa neWorld Bureau of Metal Statistics (WBMS) neChitatu yakaratidza kuti misika yepasi rose yealuminium yakanga isina kukwana 588 zviuru zvematani kubva munaJanuary kusvika munaApril 2021. Muna April 2021, kushandiswa kwemusika wealuminium pasi rose kwaiva mamiriyoni 6.0925 emamiriyoni. Kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi 202...
Iva nehunyanzvi nekuti akazvitsaurira, anotisarudza, anosarudza ruzivo rwakasiyana rwesevhisi.Kambani yedu inobatanidza mhinduro mupi weR&D, dhizaini, kugadzira uye kushambadzira masevhisi.
27,11,21June 16, 2017
2021, iwe unofanirwa kunzwisisa zvakare aluminium ...
22,11,21June 16, 2017
08,11,21Chikumi 16, 2017
15,10,21Chikumi 16, 2017
17,09,21June 16, 2017